Iwo mahwendefa ane yakakura skrini: modhi, zvinopihwa uye nezvimwe
Kana iwe chaunoda piritsi ine hombe skrini, nhasi isu tichataura nezve modhi iyo iwe yauchazoda kune yayo yakakura kuratidza. Zviri pamusoro piritsi hombe pamusika Mazuvano, kunyangwe nekuda kwekushomeka kwayo kutengesa, yakamira kutengeswa kwenguva yakati rebei.
Ramba uchifunga kuti imwe yemabhenefiti makuru ehwendefa kutakurika kwayo uye nekugadzira zvidzitiro zvimiro zvakakura seaya ehunyanzvi laptop, kukwezva kwayo kunonyangarika zvachose uye kushandiswa kwayo kunongogumira kune chaiwo zvikamu.
1 Mahwendefa ane yakakura skrini
2 Kubva pamasendimita api anonzi piritsi guru?
3 Zvigadzirwa zvinogadzira mapiritsi ane skrini hombe
4 Zvakanakira kuva netablet ine hombe skrini
6 Zvakakosha kutenga piritsi ine skrini huru?
7 Yakachipa widescreen piritsi
8 Convertible laptop, imwe nzira kune mahwendefa ane hombe skrini
9 HP Slate 17. The tablet hombe ine 17,3-inch screen
9.1 Mhando huru
Mahwendefa ane yakakura skrini
Pazasi iwe une sarudzo ye mahwendefa ane yakakura skrini uye yemhando yepamusoro yaunogona kutenga izvozvi:
Kune mamwe mamodheru pamitengo yakachipa asi zvakapihwa kuti maficha awo akasiya zvakawanda kuti zvidiwe, isu takasarudza kusaabatanidza mutafura yapfuura.
Heano mamwe mahwendefa makuru ane kushanda kwepamusoro, kunaka uye kukurudzirwa Kubva kumusika:
Iyo imhando inokwanisika, uye inotengeswa nekhibhodi + touchpad kuti ive ne2 mu1, uchikwanisa kuve neakanakisa emalaptops uye akanakisa emapiritsi. Pamusoro pezvo, ine mhando yakanaka, ine Microsoft Windows 10 sisitimu yekushandisa pachinzvimbo cheAroid, iyo inobvumidza iwe kuve nesoftware yakawanda, kubva kune yakajairika maapplication aunoshandisa paPC yako nemitambo yemavhidhiyo.
Kana zvakadaro yako Hardware, inosanganisira hombe 12.6-inch skrini, ine FullHD IPS pani. Iyo processor iIntel Gemini Lake, ine 8 GB ye RAM, 256 GB yemukati ndangariro, maviri-bhendi WiFi yekubatanidza, Bluetooth 4.2, USB-C, miniHDMI, uye USB 3.0 ports. Iyo inosanganisirawo hombe 38000mWh Li-Ion bhatiri rehupenyu hurefu hwekusvika zuva rimwe.
Iyi imwe piritsi hombe inosanganisirawo 12-inch skrini. Iyo IPS pani ine yemhando yepamusoro resolution ye2160 × 1440 px. Inosanganisira pre-yakaiswa Microsoft Windows 10 sisitimu yekushandisa, uye yakareruka aluminium-magnesium alloy yekupedzisa kwemhando yepamusoro. Iyo ine zvakare ruzivo rwerutsigiro rwekuitsigira patafura uye kuiona zvakanaka.
Inotsigira kubatana, USB 3.0, USB-C, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, microSD kadhi slots kusvika 128GB, uye 38Wh bhatiri rehupenyu hurefu. Yakagadzirwa ne 4120-core Intel Gemini Lake N4 processors, yakabatanidzwa Intel HD GPU, 8 GB ye RAM, uye yekuchengetedza mukati me256 GB.
Imwe yepiritsi titans ndeyeSouth Korea brand Samsung. Iyo Galaxy Tab S7 + modhi yakaiswa pakati peakanakisa emapiritsi eAroid ane skrini hombe. Muchiitiko ichi, gomo a 12.4 ”pani ine QHD resolution (2800 × 1752 px) uye inonyatso zorodza mwero we120Hz.
Inowanikwa mune yayo ese vhezheni ye128GB uye 256GB yekuchengetedza, pamwe neakasiyana mavara uye neWiFi yekubatanidza sarudzo kana WiFi + 5G sarudzo. Chinhu chinosimbisa samsung piritsi yedzimwe nhamba dzinokatyamadza dzinoperekedzwawo nezvose zvakanaka zveAndroid 10 (inokwidziridzwa neOTA), uye inosanganisirwa S Pen stylus.
Kuti mapurogiramu nemitambo yemavhidhiyo ifambe zvakanaka, chip chine simba chakaunganidzwa Qualcomm Snapdragon 850 Uyezve, ine 8 cores (1 yekushanda kwepamusoro kwe3.2Ghz, 3 ye2.4 Ghz, uye 4 yekushandiswa kwakaderera kwe1.8Ghz). Mukuwedzera, 6GB yeDDR4 RAM uye inokurumidza zvikuru UFS flash kuchengetedza inosanganiswa.
Bhatiri rayo i10090mAh kuti uwedzere kuzvitonga kupfuura zvaunofungidzira, mukuwedzera pakutsigira kukurumidza kuchaja kwe45W. Kana izvo zvichiita sezvidiki kwauri, iwe unofanirwawo kuongorora yayo 13MP yekumashure kamera uye 8MP yekumberi kamera, ine hunyanzvi hwekuita. tora 4K vhidhiyo. Inonzwika nehungwaru, ine AKG vatauri uye Dolby Atmos yakatenderedza ruzha.
Ndiyo imwe yemapiritsi makuru anoremekedzwa uye akasarudzika. Iyi Apple modhi inoisa hombe skrini iyo inosvika 12.9 ". Iyo Liquid Retina mhando pani yekupa hukuru hukuru nekuda kwehupamhi hwepixel density. Iyo zvakare ine Yechokwadi Toni uye ProMotion tekinoroji, yekuvandudza iyo color gamut uye mufananidzo mhando.
Iwe unogona kuiwana iripo mune akasiyana mavara, muWiFi kana WiFi + LTE kumisikidzwa, pamwe nekugona kubva ku128GB kusvika ku1TB kuchengetedza mukati. Pamusoro pezvo, inosanganisira imwe yeakanyanya simba processors pamusika, senge M1 chip, ine Neural Injini yekumhanyisa maAI application.
Tasva a kumashure kamera ine 12MP yakakura-ekona sensor, 10MP yekupedzisira-yakafara angle sensor uye LiDAR scanner. Iyo yekumberi kamera ndeye 7MP TrueDepth. Inobvumira Face ID kuti izivikanwe kumeso uye shandisa Apple Pay zvakachengeteka. Iyo ine zvakare ine ruzha-mhando vatauri uye 5 studio-mhando maikorofoni.
Bhatiri rako rine bhatiri rakakura, iyo inowedzerwazve nekugadzirisa software yayo, neiyo iPadOS inoshanda sisitimu, ichipa iyo yakanyanya kuzvimiririra pamusika.
Iyo Samsung yaive yakavakirwa pa Android, nepo iPad yakavakirwa paiPadOS. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kuve nese software iripo yeWindows 10, yakanakisa sarudzo iyi Microsoft Surface. Inoshandurwa iyo iwe yaunogona kushandisa selaptop ine keyboard yayo inosanganisirwa kana sehwendefa kana ukaibvisa. Uye ine 12.3 ”screen ye2736x1824px.
Inowanikwa nemagadzirirwo akasiyana-siyana e Hardware yakasimba kwazvo, ine mapurosesa akaita seaya aunogona kuwana mumalaptops akajairwa, akadai seIntel Core i5 neIntel Iris Plus Graphics GPUs, pamwe ne4GB LPDDR8X memory uye 128GB kana mamwe ma hard state hard drives (SSD).
Inosanganisirawo yakanaka ruzha system, mhando keyboard, Bluetooth, Wi-Fi 6, iyo Windows 10 Kumba 64-bit vhezheni, uye Li-Ion bhatiri rinoita kuti rigare kwemaawa akawanda richinakidzwa nekugona kwaro kuzere pasina miganhu.
Kubva pamasendimita api anonzi piritsi guru?
Chinhu chakajairika kuwana 7 ", 8" kana gumi "mapiritsi, asi mamwe mabhureki uye modhi zvinodarika zviyero izvi, kupa nyaradzo huru kune avo vanhu vanoda nzvimbo yekushanda yakakura munzvimbo dzebhizinesi, tarisa zvirimo pane yakakura skrini, kana vane matambudziko ekuona.
Kazhinji, mahwendefa makuru anonzi ayo anopfuura 10 ", kunyanya kana vasimuka kubva 12 inches. Aya manhamba maererano nehukuru hwepaneru haana zvachose, asi izvo hazvireve kuti hazvigoneke kuzviwana ...
Zvigadzirwa zvinogadzira mapiritsi ane skrini hombe
Havasi vese vanogadzira vanoshinga nemapiritsi ane mahombe skrini. Vamwe mhando dzakanakisa izvo zvinosanganisira mamwe mamodheru ndeaya:
apuro: Kambani yeCupertino ndeimwe yemafemu anoremekedzwa uye ane mukurumbira, kunyanya nekuda kwekusarudzika kwezvigadzirwa zvayo uye nehanya huru yavanopa kune ese ruzivo, dhizaini uye mhando yekuvaka kwayo uye kupera. Uye zvakare, sezvo iri kutengesa software uye hardware, sisitimu yayo yakagadziridzwa zvakanyanya, inowana yakanyanya kuita uye manhamba ekuzvimiririra.
Microsoft- Kambani yeRedmond yakapindawo mumusika welaptop neSurface line. Kunyange zvazvo ari kunyanya kutakura makombiyuta, vakaparura mamwe mahwendefa kana makuru ekushandura. Sarudzo huru kune avo vanoda kubatanidza zvakanakisa zvepasirese: kunyaradza kwelaptop ine keyboard, uye kufamba kwehwendefa kana iwe ukabvisa keyboard. Pamusoro pezvo, ivo vane Windows 10 sisitimu yekushandisa, ine yakanakisa gadget uye kuenderana kwesoftware, pamwe nehardware yakasimba kwazvo yekushanda kwakanyanya. Nhamba dzayo dzekuzvitonga dzinoshamisawo chaizvo.
Samsung: Iyo yeSouth Korea zvakare ine imwe yeakanakisa mahwendefa makuru ane Android inoshanda system. Kune avo vanosarudza masevhisi eGoogle, aya mamodheru akasarudzika, achibatanidza kuita, kuzvitonga, mhando uye zvese zvaunotarisira kubva kune chimwe chezvishandiso izvi. Ecosystem yakafanana nechikumbiro cheApple, asi isina kuvharwa kudaro, ichipa rusununguko rwakakura kumushandisi.
Muzviitiko zvose zvitatu, unogona kuwana zvishongedzo zvinoenderana yemhando yehwendefa pachayo kana yevechitatu mapato, nokudaro kukwanisa kutsigira zvikwata izvi. Kubva mapenzura edhijitari, kiibhodhi ekunze, mbeva, nezvimwe.
Zvakanakira kuva netablet ine hombe skrini
Kuve netablet ine hombe skrini kwakajeka zvinobatsira, sei:
Nyaradzo: Aya mahwendefa akanyanya kugadzikana kuona kutenderera zvemukati, kuverenga eBooks, kudzidza, kutamba, nezvimwe. Chidzitiro chavo chikuru chinovaita vakakwana kune iyi mhando yekushandisa, pasina kunetsa maziso ako zvakanyanya.
Graphics: kwete chete zvinyorwa, vhidhiyo uye magirafu emitambo yemavhidhiyo anotaridzika zviri nani, anogona zvakare kuve akakwana kune zviitiko apo kuona iwo maficha emufananidzo kwakakosha, senge vagadziri kana mafoto edhita.
Vaviri mune imwe: Inogona kunge iri nzvimbo huru yePC, sezvo nekuda kwechidzitiro chayo chikuru uye hardware ine simba, mahwendefa aya anogona kushandurwa kana 2-in-1 kana ukawedzera keyboard, touchpad kana yekunze mbeva.
Nekudaro, hazvisi zvese zvakanakira kana zvasvika kune hombe skrini piritsi, pane zvimwe asina kusimba mapoinzi zvichienzaniswa nemamwe ma compact mahwendefa. Aya mapoinzi ndeaya:
Kufambisa: nepaneti yakakura yakadaro, kufamba kuchaderedzwa, sezvo kunenge kuchirema uye kunotora nzvimbo yakawanda, iyo inogona kunge isina kugadzikana kana iwe uchida kutakura kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Nekudaro, ivo vachiri kureruka uye zvakanyanya compact pane laptop.
Autonomy- Nekuva nepaneru hombe kune simba, bhatiri rinogara rakaderera. Zviratidziro zvidiki zvinogadzira bhatiri rehuwandu hwakaenzana kugara kwemaawa akawanda. Chii chiri chokwadi ndechekuti ivo zvakare vane nzvimbo yakawanda yekuisa bhatiri hombe.
Zvakakosha kutenga piritsi ine skrini huru?
Kana uri kutsvaga chimwe chinhu kuitira kushandiswa pakupedzisira, shandisa mamwe maapplication ekutumira mameseji nekukurumidza, kubhurawuza, email, nezvimwewo, chokwadi ndechekuti hazvina kukodzera kutenga imwe yeaya mahwendefa ane hombe skrini. Kwete kana iwe uchida kufamba kwakanyanya, ndiko kuti, diki uye rakareruka piritsi raunogona kutora chero kupi kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Pane kudaro, kubvisa nyaya idzodzo, mune dzimwe dzese, kutenga piritsi ine hombe skrini inokurudzirwa zvakanyanya. Nenzira iyo iwe unodzivirira kumanikidza hupenyu hwako kuti uone zvidiki zvidiki pamasikirini madiki, kana kunakidzwa nezvirimo zvine zvimwe zvinofadza zviyero. Inogona zvakare kuve yakanaka kwazvo kune kushandiswa kwehunyanzvi, kunyanya kune vagadziri kana vemifananidzo, uye kunyange kune avo vanoishandisa semuverengi we eBook.
Imwe nyaya iyo yakakoshawo ndeyekushandisa piritsi sechinotsiva PC. Muchiitiko ichocho, zviri nani kutenga chimwe chezvikwata izvi zvinopa sechiitiko chakafanana sezvinobvira. Izvo zvinoita kuti zvikodzere kubhadhara zvishoma uye kusagumbuka nemamwe madiki mahwendefa ...
Pakupedzisira, kune vakwegura kana avo vane maonero akaderedzwa, kuva nekrini yakakura inogona kuva nzira kunatsiridza kuwanikwa. Iwe uchakwanisa kuona zvinyorwa uye mifananidzo muhukuru hukuru.
Yakachipa widescreen piritsi
Imwe yepasi pasi peiyo hombe skrini piritsi ndeye mutengo wayo, sezvandambotaura muchikamu chapfuura. Naizvozvo, usatarisira kuwana mahwendefa makuru akachipa zvakanyanya. Mazhinji ndeekumusoro-kumagumo, uye anowanzo ane simba rakawanda, uye akaenzana inoshandurwa kana 2-in-1 mune dzimwe nguva.
Nekudaro, kune mamwe mahwendefa mahombe anodhura anodhura semhando dzeChinese. CHUWI o Teclast kazhinji vane mamodheru ane a yakanaka uye yakachipa. Mune zvimwe zviitiko, vanogona kudhura zvakada kufanana kana kushoma pane mamwe mahwendefa madiki kubva kumhando dzinodhura ...
Convertible laptop, imwe nzira kune mahwendefa ane hombe skrini
Un inoshandurwa kana 2-in-1 laptop, imwe nzira inogoneka kune iyi piritsi ine skrini hombe. Pane misiyano pakati pezvikwata zviviri izvi, kunyangwe mune dzimwe nguva vanoparara, kunyanya nekubuda kwemamwe mamodheru akadai seMicrosoft Surface. Zvisinei, makiyi acho ndeaya:
Convertible kana 2-in-1 malaptops anosanganisira a kubata screen iyo iwe yaunogona kushandisa senge piritsi mune chero modhi, asi ivo zvakare vanosanganisa iyo yakajairwa kiibhodhi uye touchpad yekunyaradza kukuru paunenge uchitaipa kana kufamba uchitenderedza interface. Vamwe vanobvumira kiibhodhi kupetwa kuseri kwechidzitiro uye kutaridzika kwayo kunenge kwakafanana nehwendefa, kungorema zvishoma. Vamwe vanokubvumidza zvakananga kuti ubvise kiibhodhi kuti usiye chete yekubata skrini, saka ivo vanove piritsi sekudaro.
Naizvozvo, iyi mhando yemidziyo inogona kufanana nehombe-screen piritsi, ine 11, 13, 14, kana 15-inch skrini ..., paunowedzera imwe kiibhodhi. Kune rimwe divi, malaptop anowanzo akavakirwa pa x86 processors uye vanouya neWindows inoshanda sisitimu, nepo mahwendefa akavakirwa pamachipisi eARM uye ane masisitimu akaita seAroid. Zvisinei, mamwe mamodheru, akadai pamusoro, Teclast, CHUWI, Lenovonezvimwewo, vakadzima misiyano iyi sezvo zvakare yakavakirwa paIntel chips uye vanouya neMicrosoft Windows ...
Muchidimbu, mukana wehwendefa pamusoro peinoshandurwa ndeyekuti vanowanzova ne yakawanda compact size uye huremu hushoma, uyewo kuzvitonga kukuru.
HP Slate 17. The tablet hombe ine 17,3-inch screen
Kuti upedze, tobva takusiira piritsi hombe rave kutengeswa kusvika nhasi. Tichazomboona chinhu chakadaro zvakare here? Hongu, asi parizvino isu tinofanirwa kumirira sezvo izvozvi hatisati tawana chero chinhu chekutengesa kwezviyero izvi.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve piritsi iyi ine hombe skrini, pazasi iwe unowana wongororo pfupi yeayo makuru maficha.
Iyo HP Slate 17 piritsi ine a 17 inch screen yakakomberedzwa ne0,62-inch gobvu furemu. Chigadzirwa chacho chinorema anenge 5.4 mapaundi, saka kuda kurema kunge laptop ine 15-inch skrini, asi inotakurika nekuti haina keyboard yakanamirwa. Presents a yakashongedzwa dhizaini ine curved edges uye nhete skrini bezels.
Iyo yakareba speaker grill iri pazasi pechidzitiro inotora imwe nzvimbo pahwendefa, izvo zvinoita kuti ive yakati kurei pane yainofanira, muchokwadi, yakawedzerwa kune yayo hombe skrini, inoiita piritsi hombe pasi rose nhasi. Kunyange zvazvo Beats audio system inoshambadzirwa inokwanisa kuzadza kamuri, munyaya iyi haisi kunyatsoonekwa, nevamwe vashandisi vachifunga kuti huwandu hwevatauri hwakaderera zvikuru kana huchienzaniswa nemamwe mahwendefa.
Iri piritsi hombe rescreen rine chena kumberi nekumativi ese, uye chivharo nhema kumashure chine mapini maviri anodzoreka ekutsigira anogona kusetwa pa1200, 1700 kana kungopetwa zvachose. Iyo 17,3-inch touchscreen inotsigira kugadzirisa kwe Yakazara-HD kuratidza, ine mavara anopenya uye yakanaka yekuona kona. Kubata kwese kwakapfava uye hapana lags kana uchifamba uchitenderedza skrini.
Iine inokurumidza processor Intel Celeron N2807, pamwe ne2GB ye RAM uye 32GB yemukati yekuchengetedza ndangariro iyo inogona kuwedzerwa uchishandisa SD makadhi (ine slot yemhando iyi yekuchengetedza kadhi). Iyo sisitimu yakaita zvakanaka muakasiyana mabhenji bvunzo uye inotsigira angangoita ese aripo maapplication aripo eiyo Android sisitimu yekushandisa pasina tsaona kana lags.
Kutamba mitambo inorema uye multitasking zvinogoneka, kunyangwe chiri chokwadi kuti unogona kusangana nekushomeka nguva nenguva kana uchimhanya unorema mutambo kana application. Iri ndiro piritsi rakakura kwazvo pasi rose pamusika nhasi uye rine Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, SD kadhi kuverenga, uye USB 2.0 chiteshi pasi pechimire.
Kunyangwe iyo skrini yakakura, bhatiri rinogara kweanenge maawa manomwe nehafu, nguva yakada kufanana neaya emahwendefa maduku akawanda. Pamusoro pezvo, inopa sarudzo dzekuvandudza kuita kwebhatiri, senge modhi ine inokurumidza processor uye gadziriso kune yazvino Android sisitimu yekushandisa, asi ichokwadi kuti kuvandudzwa uku kunomiririra kuwedzera kukuru kwemitengo.
Zvisinei neizvi, kana iwe uchitsvaga ine simba inotakurika multimedia centre kuti utore ako ese mabasa uye varaidzo newe, iyo HP Slate 17-L010 piritsi ichashanda ichi chinangwa pasina kusvika yakawandisa mutengo.
Solid state hard drive ine 32GB yekuchengetedza
Kuwedzera simba kuburikidza ne SD kadhi
17,3-inch kuratidza uye Intel HD mifananidzo
Yakajairwa Android 4.4 KitKat sisitimu yekushandisa uye hupenyu hwebhatiri hweanopfuura maawa manomwe neshanu
Intel Celeron M-N2807 processor
Mahwendefa akadhura » Size » Mahwendefa makuru ekrini